JingOS inoramba ichiita zvirinani uye inogona kuve yakanyanya kunaka sarudzo yePineTab | Linux Vakapindwa muropa
Pakutanga kwegore yakazozivikanwa JingOS. Iyo inoshanda sisitimu iyo pakutanga inoita kunge yakagadzirirwa mafoni nhare, asi inogona zvakare kuyedzwa uye kuiswa pamakomputa. Panguva ino inogona kuyedzwa pamakomputa eX86, asi kurodha pasi iyo ISO yatinofanira kuenda kurodha webhusaiti uye tipe email kutipa iyi link. Ini ndinofunga ndechimwe chinhu chisingaite kana isu tine PineTab uye tisingade kushivirira.
Kunyangwe ivo vari kushanda pazviri, izvozvi hapana ARM vhezheni, zvinoreva kuti haigone kuiswa paPINE64 piritsi. Asi anozogona, uye kana zvese zvikaenda sepakutanga, anogona kuve iye anoendesa katsi kumvura. Icho chiitiko chaicho nekuti JingOS yakavakirwa paUbuntu 20.04 uye inoshandisa yayo vhezheni yePlasma Mobile, nharaunda imwechete iyo Manjaro inoshandisa, asi ivo vanogadzira ino sisitimu inoshanda vari kutarisa kune nyika skrini.
1 JingOS inogona kuyedzwa uye kuiswa pama x86 michina izvozvi
2 Yakagadziridzwa Plasma Nhare
JingOS inogona kuyedzwa uye kuiswa pama x86 michina izvozvi
Nzira yakanak yekuyiyedza kune avo vedu vasina x86 piritsi kana komputa iri nayo GNOME Mabhokisi. Vaya venyu vachiri neX86 PC vanogona kuimhanyisa pane Live USB, uye kunyange kuiisa, asi haina kufanana kune vedu vane michina mitsva. Ndine, uye zviri pachena kuti haina kunyatsofanana, asi zvakakwana kumutsa chishuwo changu chekuyedza paPineTab uye tenda kuti ichave iyo sisitimu yandinoshandisa mune ramangwana.
JingOS ndizvo zvichibva paUbuntu, uye iyo graphical nharaunda yaanoshandisa ndeye tsika Plasma Mobile. Iyo inoshanda sisitimu inosanganisira yayo Calendar, Voice Notes, Mafaira, Mifananidzo uye Calculator kunyorera, pakati pevamwe, uye ine WPS Hofisi yakaiswa nekumisikidza, chimwe chinhu chandisina kukwanisa kuyedza nekuti chaisazonditendera kuti ndibvume iwo mazwi. Uye ndezvekuti mu v0.8.1, desktop desktop hazvifambe zvakanaka; Zvakaoma kunyatsojeka negonzo, asi ndinofanira kurangarira kuti ini ndakaiyedza pamushini chaiwo.
Yakagadziridzwa Plasma Nhare
Nezve Plasma MobileKana tichivhura windows isu tinoona zvakafanana nezviri mu KDE edhisheni yeManjaro kana postmarketOS, semuenzaniso: iyo application inovhura neine ruvara rwemberi, asi muJingOS haina kuvhura yakatarisana izere skrini Iyo interface iri muChirungu, asi iro ibasa re KDE, iro parizvino risingatenderi kuwedzera mapakeji emitauro. Multitasking, senge iyo yakazara interface, yakafanana neiyo iPadOS, uye kana ndisina kuvhura chiito ndechekuti hazvigone kuitwa muGNOME Mabhokisi (ini handizive kana zvichigona kuitwa paX86 PC nekuti ini handidi ndine imwe).
Nezve mashandiro ayo, zvinoita sekunge zvese zvinoshanda mushe, kunyangwe ndichifanirwa kutaura kuti ndasiya 3GB ye RAM kumuchina chaiwo uye kuti ndanga ndichivhara maapplication (alt + F4) pane kuvasiya kumashure.
Kune uyo ari kushamisika kuti ichave rini Shanduro yeARM, inozivikanwa chete kuti iri kushanda pairi uye kuti kune boka riri kurikuedza. Kana zvese zvikafanana muvhidhiyo, pamwe nemasaini, yangu PineTab yatove neinokunda sisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » JingOS inoramba ichiita zvirinani uye inogona kuve yakanyanya kunaka sarudzo kune vashandisi vePineTab
DhiyabhorosiX 1.2: Diable kodhi reimplementation yabuda
Linux uye yakavhurika-sosi: chaiyo kududzwa kwe ...